Ukuwo vana chiremba vanoti hapana nhaurirano dzichaitwa pakati pavo nehurumende sezvo yaratidza kusava nehany'a navo.
Studio7 yashanyira chipatara cheParirenyatwa uko varwere vakande vakapiwa zuva ranhasi kuti vazoonekwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana, vanga vachidzorerwa kumba vachipihwa mamwe mazuva ekuti vazodzokere.
Mumwe wevarwere ava, uyo asina kuda kudomwa nezita asi ane chirwere chegomarara, audza Studio7 kuti nhasi kange kari kepiri achiwedzerwa mazuva ekuti avhiyiwe.
Amai ava, avo vanga vachiratidza kurwadziwa zvikuru, vati dai hurumende yagadzirisa dambudziko raana chiremba kuitira kuti vadzokere pamabasa.
Vanoziva zviri kuitika vanoti Parirenyatwa ine varwere vari pasi pemazana matatu vane mibhedha, asi kana zvinhu zvichifamba zvakanaka, chipatara ichi chine nzvimbo yevarwere vanosvika chiuru chimwe nemazana maviri.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano, VaObediah Moyo, kuti hurumende ine zvirongwa zvipi kuitira kuti varwere vazobatsirikana mushure mekudzinga vana chiremba ava.
Mumwe chiremba akadzingwa basa, Doctor Trevor Chivandire, vaudza Studio7 kuti vakawana tsamba yekudzingwa kwavo iri mumba mavo nezuro manheru.
VaChivandire vati change chiri chido chavo kushandira Zimbabwe, asi vati kana zvaramba vachatsvaga basa kune dzimwe nyika.
Vakasanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Doctor Tawanda Zvakada, vati vamisa nhaurirano dzese nehurumende kusvika vana chiremba vari kudzingwa ava vadzoserwa kumabasa.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe, uye vari mutauriri weZHDA, Doctor Tapiwa Mungofa, vati havatombovhundutswi nekumiswa mabasa nekuti mari yavange vari kuhora yanga yakangofanana nekusaenda kubasa.
VaMungofa vati kudzingwa kwavana chiremba ava panguva iyo munyika manga mune vana chiremba vashoma, zvinowedzera kuipa kwezvinhu munyaya dzehutano.
Health Services Board yakabudisa gwaro kuvatori venhau nezuro ichizivisa kuti yadzinga vanachiremba makumi manomwe nevanomwe.
Sachigaro veHealth Service Board, Dr. Paulinas Sikosana, vakaudza Studio7 nezuro kuti matare ari kutonga vana chiremba vasiri kuenda kubasa ari kuenderera mberi kudzamara vana chiremba vose mazana mana vanzwikwa nyaya dzavo.
Dr. Sikosana vakatiwo madhokotera anotadza kumira pamberi pematare aya, anobva adzingwa basa.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio7 inoratidza kuti vazhinji vakadzingwa basa ava vanga vachishandira pachipatara cheParirenyatwa.
Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo.
Vana chiremba vakatangawo kuramwa mabasa vachiti basa riri kuvaremera zvichitevera kusaenda kubasa kwavana chiremba ava vachiti havana mari dzekufambisa.
Kuipa kwezvinhu munyaya dzehutano kwawedzerwawo nekuramwa mabasa kwevana mukoti vemakirinika ekanzuru anova ndiwo akawanda kumisha inogara vazhinji.